पिंजडा..की नायिकालाई निखिलले यही साल भित्र्याउने ! « Ramailo छ
पिंजडा..की नायिकालाई निखिलले यही साल भित्र्याउने !
समय : 3:35 pm
फिल्म ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ को रोमान्टिक गीत रिलिज भएको छ । अर्जुन पोखरेलको संगीत र मुत्तक उदासको शब्द रहेको गीतमा अञ्जु पन्तको स्वर छ । गायिका पन्तलाई स्वरमा संगीतकार पोखरेलले साथ दिएका छन् । नायक निखिल उप्रेती र नायिका सारा शर्पाइली फिचरिंग गीतको भिडियोलाई रामजी लामिछानेले कोरियोग्राफी गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस् :
द्धन्द्ध निर्देशक हिमाल केसीको डेव्यु निर्देशन रहेको ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ माघ ४ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्ममा रमेश सुवेदी र बाबुराज सिंह निर्माताको रुपमा रहेका छन् भने बसन्त शर्मा र सुशान्त श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माताको रुपमा छन् । रोशित पुरी, गोविन्द गैरे र चन्द्र बहादुर क्षेत्र तीनै जना फिल्मका निर्माता हुन् । फिल्मका प्रस्तुतकर्ता भने श्रीराम बराल हुन् ।
एक्सन स्टार निखिल उप्रेतीले ‘पिंजडा’बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डेव्यु गरेका थिए । पिंजडा ब्याक अगेन मा निखिल र सारासँगै पुकार भट्टराई र बाल कलाकार कसाग्र भट्टराईको पनि अभिनय छ ।
कबड्डीकी मैंयालाई ६ तस्बिरमा हेर्नुस्